स्कूल कलेज पढ्ने देखि ९८ बर्ष सम्मकाले प्रयोग गर्छन यौन खेलौना - हेटौंडा टुडे
स्कूल कलेज पढ्ने देखि ९८ बर्ष सम्मकाले प्रयोग गर्छन यौन खेलौना
२९ मंसिर २०७६, आईतवार २०:५६
मंसिर २९ , हेटौंडा
हेटौंडामा नै विगत लामो समयदेखि पृथक व्यसाय गर्दै आउनु भएका एक सफल अनि कुशल व्यवसायिसँगको कुराकानि। उहाँ स्विट ड्रिम एण्ड सेक्रेट सेक्स टोई सेन्टर का प्रबन्धक हुनुहुन्छ । जुन हेटौंडा १० माच्छा बजारबाट हाल हेटौंडा ४ अवस्थित ओमभवन नजिकै सरेको छ । जहाँ सेक्स सम्बन्धि सम्पूर्ण आईटमहरु पाइन्छ ।
बिशेषत सेक्स लजास्मत विषय पनि हो । सेक्स सबैलाई अत्यावश्यक चिज हो । पछिल्लो समयमा युवा पुस्ता हरुमा सेक्स सम्बन्धि ज्ञान वा प्रचार प्रसार को कमिले कतिको घरबार बिहिन पनि हुन पुगेका छन त कति असुरक्षित शारिरिक सम्बन्धले रोग को पनि सिकार बन्न पुगेका छन । यस्तै यस्तै विषय र पेरिफेरिमा रहेर हामिले स्विट ड्रिम एण्ड सेक्रेट सेक्स टोई सेन्टरका प्रवन्धक मेघराज खतिवडा सँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रश्न :- मेघराजजि सुरुमा त यहाँ लाई धेरै धेरै स्वागत छ ?
उतर :- धन्यवाद ।
प्रश्न :- अब बल्यावस्था बाट सुरु गर्न मन लाग्यो , कुन ठाउँ मा जन्मनु भो कस्तो रह्यो त बाल्यकाल ?
उतर :- प्रश्न को लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद , बाल्यकाल को कुरा गर्दा खासै त्यति याद छैन , जन्मेको त झापामा हो। बुवा सरकारि ओकिल हुनुहुन्थ्यो , दिनप्रतिदिन म बढ्दै गए अनि काठमाडौ आए तर बाल्यकाल खासै याद भएन ।
प्रश्न :- कसरि सुरुवात गर्नुभयो यो व्यबसाय छोटकरि मा बताइदिनुस न रु ?
उतर :- म ८- १० वर्ष विदेश पनि बसे ,सोचेको जस्तो न हुदो रहेछ अरुको देश र मलाइ आफ्नै देश मा केहि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाइ यो ब्यवसाय गर्नि सोच बनाए साथिहरु सँग सल्लाह गरे साथिहरु ले नि राम्रो सल्लाह दिनुभयो र विदेशमा हुँदा साथिहरु बाट नि धेरै सल्लाह मिल्यौ सेक्स टोएको बारेमा साथिहरुबाट अलि जानि र नेपाल आएर यो व्यबसाय सुरु गरे ।
प्रश्न :- ब्यवसायबाट तपाइको घरपरिवार पाल्न बच्चाहरुको आवश्यकता पुरा गर्न कतिको सहज भइरहेको छ ?
उतर :- यस्तो छ मरो लगानि अनुसार हुनुपर्नि प्रोफिट त छैन , तैपनि मैले जागिर खाएपनि महिनाको १५ र २० हजार तलब खाइएला, भन्नि बित्तिकै कतै निस्केर हिड्न पाइदैन , भोलि मेरो परिवार मा कसैलाइ केहि भयो भने सटर लगाएर सजिलै नस्किेर हिड्न पाइन्छ। जे होस अहिले सम्म धानिराको छु भन्नुपर्छ ।
प्रश्न :- कति वर्ष देखि कति वर्ष उमेर सम्मले यहाँ तपाइकोमा सेवा लिन आउछन ?
उतर :- स्कूल कलेज पढ्नि देखि ९८ बर्षसम्मका मानिस यहाँ सेवा लिन आउछन् ।
प्रश्न :- कति रुपैँया देखि कति रुपैँया सम्मको कण्डम र सेक्स टोए पाईन्छ त यहा ?
उतर :- मैले सस्तोमा ५ रुपैँया देखि महँगोमा १५०० सम्मको छ र सेक्स टोए मा नर्मल सानो मा १००० देखि सुरु छ ।
प्रश्न :- मेघराजजि अब अन्त्यमा के भन्न चहानुहुन्छ अन्त्तरवार्ता पढ्ने पाठकहरुलाई ?
उतर :- म के भन्न चाहान्छु भने एकपल्ट आउनुस बुझनुस सेवा लिनुपर्छ भन्ने छैन अएर बुज्दा नि हुन्छ । आफ्नो समस्या खुलेर राख्नुस नलजाइ , पर्ण गोप्य वातावरण मा हुन्छ , म यहि भन्न चाहान्छु ।
प्रश्न :- हब्स त मेघराज जि आफ्नो ब्यस्तताको बाबुजुत हामिलाइ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ?
उतर :- मैले जानेका कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो तपाइलाइ नि धेरै धेरै धन्यवाद ।
आज हामिले मेघराज खतिवडा जि सँग गरिएको कुराकाँनी राख्यौँ यसैगरि हामि अर्को दिन फरक अतिथि सँग गरिएको कुराकानि हेटौँडा टुडे मा अपडेट गर्नेछौँ। यो कुराकानि मन परेमा र धेरै मानिस सम्म पुराउन सेर गर्नु होला । धन्यबाद